Soomaali maryooley iyo Middi ku dagaallanka Maxaa kala Haysta! (Faallo)
Home » Qormooyinka » Soomaali maryooley iyo Middi ku dagaallanka Maxaa kala Haysta! (Faallo)	Soomaali maryooley iyo Middi ku dagaallanka Maxaa kala Haysta! (Faallo)
24/12/2016	958 Views Markii aan Todobaadkan daawaday Wiil Soomaaliyeed oo Middi ku dhaawacay dhowr Qofood oo aan waxba ka galabsan meel Tareenada laga raaco oo ku taalla Magaalada London ee Boqortooyada UK ayey Xusuusteydu dib u laabtay, waxay dib u aqrisay dhowr dhacdo oo Nin Soomaaliyeedi Middi dad kuwa dilay ama ku dhaawacay magaalooyin kala duwan oo caalamka ku yaalla.
Waxaan is weydiiyey waxa Soomaalida u gaar yeelay inay Toorreey ku dagaallamaan oo dhexdooda isku dilaan ama dadyow kale oo aan waxba galabsan ugu waxyeelleeyaan?. ma helin jawaab sax ah mid baan se maleeyey.haddii dib loogu laabto dhaqankeenii hore (berigii miyiga) ee dadku xoola raacatada ahaa, hubka kaliya ee waagaa la heli karay waxaa u badnaa Middi ama Toorreey ay soomaalidu sameysan jireen iyo dabcan Waranka oo xilliyadaas Qoriga maanta lagu dagaallamo ka dhignaa. malaheyga waa Hiddo soo jireen ah oo aan awoowe-yaal ka dhaxalnay,mayee waxaa noogu wacan duruufo dhib badan oo aan soo marnay misna Maskaxdeena waxyeello daran u geystay.
Waddankan Norway ee aan daganahay kaliya tiro ka toban jeer ama ka badan ayaa Rag soomaaliyeed Middi nafta kaga qaadeen dad badan oo Rag iyo Dumar ba isugu jiray. aad ayaan uga xanuunsanayaa in Todobo Haween Soomaaliyeed ah Dalkan Raggii qabay ay Middiyo nafta uga qaadeen,kaaga sii darane qaar baa Hooyadii iyo xataa Carruurtii sabiga ahayd ee ay dhaleen gacantooda ku dilay. haddii aad Su’aal ku sababta ay sidaas u yeeleen wax iga weydiisana ma hubo inaan jawaab saxsan ku siin karo,waxaase dhaqaatiirta Cilmi nafsiga qaabilsan ee dalka Norway iyo Qareenada u doodayba sheegeen in qaar dilayaashaa ka mid ahi maskaxiyan ay xanuunsanaayeen.kaasina waa qiilka kaliya ee loo helay in Nin uu dili karo Xaaskiisii iyo Carruurtiisii. Qaar Ragga aan soo sheegay ka mid ah Hooyooyinkii ayey dileen aseey Carruurtii heystaan oo ay xanaaneynayaan inta looga imaanayo ee Boolisku ka war helayo Fal-dambiyeedka ay geysteen. dhacdii ugu dambeysay dhowr bilood muddo hadda laga joogo ayaa Nin Soomaaliyeed Magaalada Bergen ee Dalka Norway ku dilay Xaaskiisii oo Lix carruur ah u lahayd. wuxuu isaga oo welwelsan soo kaxeeyey qaar Carruurtii ka mid ah markaasuu u geeyey Nin ay Qaraabo ahaayeen. uma sheegin wixii uu sameeyey wuxuuse u sheegay inuu qeybtii kale ee Carruurta Skuulka ka doonayo sidaas darteed uu kusii simo inta uu ka imaanayo,mase doonin Carruurtii e wuxuu toos u abbaaray Saldhigii Booliska si uu isagu isku xiro. wuxuu Booliska u sheegay inuu Xaaskiisii soo dilay sidaasna uu u yimid Saldhigga. waxay ahayd dhacdo lala yaabay.Anigu Ninkaas Maalin ayaan muddo meel wada joognay dhowr sano ka hor inta uusan dilka geysan,wuxuu ahaa Taksiile u ekaa Nin caadi ah,uma muuqan nin ay ka suurtowday waxa uu sameeyey,waxaanse Soomaali badan oo halkan ila dagan ka bartay maah maah cusub oo leh “Sida dharka loo wada xiranyahay looma wada fayooba”, macnaha Dadku waa wada labisanyahay oo muuqaalka waa la isaga wada egyahay masxaxiyanse looma wada caafimaad qabo.
Intaas waxaa dheer Dhalinyaro Soomaaliyeed oo Dalkan Norway dagan ayaa maanta Xabsi sugayaal ah markii ay Middi ku dagaalameen,kuwo kalena Dhalashada Dalkan inay qaataan ayaa loo diiday markii ay ku caddaatay inay Qof Toorreey ku weerareen dhib haku geysteen ama yaaney ku geysane. Tani hadda waxay noqon rabtaa Calaamad Soomaalida lagu garto,waanaba lagu yaqaan hadda la joogo.
waxaan is weydiiyey haddii Dadkan Soomaaliyeed (intooda Middiyaha ku dagaallama) ay heysan lahaayeen Qoryaha lagu dagaallamo sow sida kuwa Dalkii jooga ee maalin walba Qof dilaya oo kale dadka uma laayeen?.dabcan haa…
Waxaa qoray: Qaasim Cabdulle Xuseen (Nero).
Previous: Ciidamada amniga Boosaaso oo gacanta ku dhigay ganacsato xiriir la leh Al-shabaab..
Next: Gaso, Ganuun, Gasiin Q.21aad (Prof.Cali Jimcaale Axmed)